गर्भवती हुनुभएकोमा बधाई ! |
गर्भवती हुनुभएकोमा बधाई !
प्रकाशित मिति :2019-12-30 12:30:25
ललितपुर । इटहरी उपमहानगरले पहिलो पटक गर्भ जाँच गराउन आउने प्रत्येक महिलालाई शुभकामना तथा बधाई कार्ड दिने भएको छ । उपमहानगरले गर्भवतीलाई ‘तपाईं गर्भवती हुनुभएकोमा बधाई तथा शुभकामना’ लेखिएको कार्ड दिन लागेको हो ।
कार्डको पछाडी पट्टि भने गर्भावस्थामा के गर्ने, के नगर्ने, केकस्ता सावधानी अपनाउनुपर्छ भन्ने जानकारी उल्लेख गरिने छ ।
यसैगरि महानगरले विवाह दर्ता गर्न आउने प्रत्येक दम्पतिलाई समेत दाम्पत्य जीवनको शुभकामना उल्लेखित कार्ड दिने छ । कार्डको पछाडि सन्तानको चाहाना राख्दा अपनाउनुपर्ने सावधानी र अपाङ्गता हुन नदिन के गर्नुपर्छ ? भन्ने जानकारी लेखिएको हुने छ ।
इटहरीमा माघ १ गतेदेखि सुरु हुन लागेको तीन वर्षे अपाङ्गता रोकथाम तथा पूनस्र्थापना कार्यक्रम अन्र्तगत कार्ड दिइने भएको महानगरले जनाएको छ ।
यो कार्यक्रम अन्र्तगत इटहरीका सबै महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई एक एक वटा मोबाइल प्रदान गरिने छ । उनीहरुले प्रत्येक गर्भवतीको अनलाइन दर्ता गराउने छन् । सिस्टमले नै गर्भ जाँच गराउने जानकारी दिने छ र महिला स्वयंसेविकाहरुले जाँच गराउन उत्प्रेरित गर्ने छन् ।
गर्भअवस्थादेखि नै अपाङ्गता हुन रोक्न यस्तो अभियान सुरु गरिएको उपमहानगर प्रमुख द्ववारिकलाल चौधरीले बताए ।
सुत्केरी पछि ५४ घण्टा, तीन दिन र सात दिनभित्र बोक्न मिल्ने अल्ट्रासाउण्ड मेसिनसहित सहजकर्ताहरुले घरमै पुगेर सुत्केरी महिलाको स्वास्थ्य जाँच गर्ने छन् ।
सामाजिक विकास मन्त्रालय, इटहरी उपमहानगर र करुण फाउण्डेसनको त्रिपक्षीय लगानीमा सो कार्यक्रम संचालन हुने छ । कार्यक्रम अन्र्तगत अपाङ्गता हुनै नदिन रोकथामका कार्यक्रम, अपाङ्गता भएकाहरुलाई पूनस्र्थापना र सहयोग तथा क्षमता अभिवृद्धि गरि आत्मनिर्भर बनाउने कार्यक्रमहरू संचालन गरिने छ ।
आइतबार इटहरी उपमहानगरका प्रमुख द्धारिकलाल चौधरी र करुणा फाउण्डेसनका सहनिर्देशक योगेन्द्र गिरीले चार करोड ३६ लाख १४ हजार ७० रुपियाँको सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरे ।
करुणा फाउण्डेसनका वरिष्ठ कार्यक्रम ब्यवस्थापक कमल कोइरालाका अनुसार इटहरीका सबै अपाङ्गता भएकाहरुको तथ्यांक संकलन गरि प्रोफाइल तयार गरिने छ । उनीहरू के चाहन्छन् ? लक्ष्य निर्धारण गरि सोही अनुरुपको क्षमता अभिवृद्धिका तालिमहरू पनि संचालन गरिने छ ।
सबै टोलमा अपाङ्गता भएकाहरुको समूह, वडा र पालिका स्तरीय समिति गठन गरिने छ । समितिमार्फत क्षमता अभिवृद्धि गरि विभिन्न संघ संस्था, सहकारीको नेतृत्वमा पुग्न अभिप्रेरित गरिने छ ।